Mayelana Nathi - Jiangsu DZX Technology Co., Ltd.
I-Jiangsu DZX Technology Co., Ltd, umkhiqizi wamabhayisikili kagesi. Kusukela sasungulwa ngo-2015, sizibophezele ekunikezeni abasebenzisi emhlabeni wonke amathuluzi okuvakasha alula ahlukahlukene namathuluzi okugibela afanele izimo ezihlukahlukene.
Eminyakeni eyisithupha edlule, silandele eduze inkambiso yezikhathi nezidingo zabasebenzisi, futhi sithuthukise imikhiqizo yezigaba ezahlukahlukene. Elinye lamabhayisikili kagesi asongekayo amancane lithole ilungelo lobunikazi bomhlaba wonke, futhi imikhiqizo yethu namasevisi anconywe kakhulu ngamakhasimende emhlabeni jikelele.
Amabhayisikili asongekayo kagesi anesisindo esikhulu kakhulu, amabhayisikili asezintabeni kagesi, amabhayisikili ahamba ngamasondo e-fat tire beach, amabhayisikili asezintabeni ekhwalithi ephezulu ye-carbon fiber frame namabhayisikili e-ATV quad, izimoto ze-UTV buggy, umkhiqizo wethu wawusetshenziswa kakhulu abantu ababejwayele ukuya edolobheni, futhi abathanda ukuhamba. hamba uyozingela noma uhambe entabeni, futhi imikhiqizo itholakala emapaki nasemabhishi ukuze iqashwe.
Ingoma Yentsha iwumkhiqizo wethu oyinkanyezi ngoba incane futhi inesisindo esincane, umkhiqizo uzuze idumela elihle emhlabeni jikelele.
“Ikhasimende kuqala, ukusebenzisana, ukwamukela amaphupho, ukusebenza kanzima ngothando”
Inkampani ye-Jiangsu DZX Technology, ngenani layo lokukhiqiza umkhiqizo osezingeni eliphezulu, futhi inikeze isevisi engcono kakhulu kumakhasimende, inkampani iphule izigidi eziyi-100 zama-USd ekuthengisweni ngonyaka ka-2020.
Futhi lena yindawo yokuthi abasebenzi bakhe bafeze amaphupho abo, i-DZX ilethe impilo engcono kubasebenzi bayo uma besebenza kanzima, futhi ukusebenza kanzima kungenza inkampani iqhubeke nokuba yinhle.
◊ Isevisi ye-One-stop: Ithimba elinamandla lokuthengisa nokuthenga lizomba imfuneko yamakhasimende futhi linikeze abakufunayo ukusiza ikhasimende lethu ukuthi lidayise umkhiqizo futhi likhule ndawonye
◊ Ilungelo lobunikazi: “Ingoma Yentsha” ingumkhiqizo wethu welungelo lobunikazi emhlabeni wonke.
◊ Isitifiketi: Sine-UL, CE, EN15194, ROSH, KC isitifiketi sokuhlangabezana nemfuneko yazo zonke izimakethe
◊ Iwaranti: Iwaranti yebhayisikili kagesi inyanga eyi-12, iwaranti yebhayisikili 36 inyanga
◊ Qinisekisa Ikhwalithi: Iqembu eliphelele nelinochwepheshe le-QC, wonke amabhayisikili azohlolwa ngaphambi kokuthi ashiye efekthri
◊ Isevisi yangemuva kokuthengisa: Ividiyo yobuchwepheshe izohlinzekwa ukusiza amakhasimende ukulungisa awabo amabhayisikili uma kunenkinga ethile ebhayisikilini
◊ Logistics: Ukuthunyelwa kolwandle, Ukuthunyelwa kwe-Air, Ukuthunyelwa kwesitimela, sinikeza ukukhetha okuhlukahlukene kumakhasimende ukuthola ibhayisikili labo.